Xaggey maraysa doorashadda dalka Itoobiya? – Radio Daljir
Xaggey maraysa doorashadda dalka Itoobiya?
Luulyo 11, 2021 6:55 b 0
Natiijada Doorashadii Ethiopia oo la shaaciyay ayaa la sheegay in ugu yaraan dhammaan kuraasta baarlamaanka ee loo tartamay ay ku guuleysteen xisbiga talada haya ee EPP.
Guddiga doorashooyinka qaranka ee dalka Itoobiya oo shaaciyey natiijada doorashadii 21-ka bishii June ka dhacday dalka Itoobiya ayaa sheegay in xisbiga talada dalkaasi haya ee EPP 436 kursi oo kuraasta baarlamaanka oo la shaaciyey, 410 ka mid ah uu ku guuleystay.
Ku dhawaad 100 deegaan doorasho ayey weli doorasha ka dhicin sababa la xiriira amni darro iyo arrimo kale.
Deegaanka Tigraay oo ay dagaallada ka socdaan wuxuu ka mid yahay deegaannada ay doorashadaasi ka dhicin. Halka deegaannada Soomaalida iyo Hararidana doorashadooda dib loo dhigay loona muddeeyey 6-da bisha September 2021.
Xisbiga Ra’isal wasaare Abiy Axmed ayaa u baahnaa 174 kursi oo keli ah si uu doorashada ugu guuleysto.
Muqdisho: Garabka Cabdi xaashi ee Somaliland oo doortay guddoomiye
RW Rooble oo booqasho sharafeed ugu tagay Ugaas Maxamed Ugaas Xaashi Ugaas Xirsi